Hain-trano : Trano hazo sy biriky am-polony maro indray kila tetsy Anosibe – Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2018 → septembre → 1 → Hain-trano : Trano hazo sy biriky am-polony maro indray kila tetsy Anosibe
Nirehitra indray Anosibe omaly ! Trano am-polony maro, manodidina ny 30 any ho any no indray kila hotohoto omaly hariva tetsy Anosibe, teo amina faritra fantatry ny rehetra eny an-toerana amin’ny hoe “Ziona”, izay avy amina fiangonana iray eny an-toerana. An-jatony any ho any ihany koa ireo tsy manan-kialofana. Voalaza fa misy hoe mbola ankizy tavela tao anatin’ity trano ity, araka ny filazan’ireo mponina teny an-toerana saingy hatreto dia mbola tsy voamarina ny mahakasika izay. Tsy nahitàna tompon’andraikitra afaka manamarina na mandiso izany rahateo teny an-toerana hatramin’ny ora nialànay teny.
Tokony ho tamin’ny dimy ora tany ho any no nitranga ny loza, raha ny angom-baovao azo teny an-toerana hatrany. “Trano hazo iray, any ambony any (ndlr any andrefana indrindra) no niatombohan’ny afo. Nitatra tao anatin’ny indray mipi-maso ka izay zaka sisa nentina nanavo-tena ” hoy ny fitantaran’ity renim-pianakaviana iray, izay isan’ireo tra-boina tamin’ity loza ity. Ilay renim-pianakavina izay mbola isoritana fitaintainana mafy mahakasika ireo ambin’ireo ankohonany, izay mbola tsy hitany. Miezaka miaro fatratra ireo ambina entana sisa avotra sy zakany ny tanany : labatra kely iray, kidoro ary sakaosy feno lamba amin’ireo mpanararaotra. Ny zaza eny an-trotrona ihany.
Misafotofoto be ihany ny resaka mandeha eny en-toerana mahakasika ny nahatonga ity trano hazo iray nirehitra voalohany ity : ankizy nilalao nampirehitra afo ny an’ny sasany, ny hafa kosa nilaza fa afo saika haninginana dia nianjera. Fa ny iraisan’ny rehetra dia hoe afon-tsaribao tsy voafehy ka nahazo ilay rindrina hazo maina ary nitatra avy eo. Nampian’ny rivotra harivariva ihany koa ka vetivety teo dia nandripaka tanteraka ireo trano am-polony maro. Sarotsarotra rahateo ihany koa ny famonoana sy ny fifehezana ny afo, eny fa na dia efa fiaraben’ny mpamonjy voina dimy aza no tonga teny an-toerana, fotoana vitsy taorian’ny nitrangan’ny loza. Ny antony, tsy misy afa-tsy lalan-tokana iray, elakelan-trano tokony ho 50 metatra any monja no ahafahana miditra ao amin’ilay toerana. Hatramin’ny ora nialàny teny an-toerana, tokony ho tamin’ny fito ora tany ho any, dia trano maromaro no mbola mirehitra saingy efa voafehy tsy hitatra kosa ny afo.
Raha ny mikasika ireo niharam-boina kosa dia fantatra fa mpiray vodirindrina mahatsapa adidy amin’ny fiaraha-monina no mandray sy mampiantrano azy ireo hatreto.